Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 19)
Nsogbu nke Clans na-enweta ọhụụ ọhụrụ, ọhụụ ọhụụ, na ndị ọzọ na otu nnukwu mmelite
Nsogbu nke ezinụlọ na-enweta ọhụụ ọhụụ, ọhụụ ọhụrụ na ọtụtụ ihe na mmelite ọhụrụ ahụ nke na-abịarute taa maka ọ ofụ nke ndị egwuregwu egwuregwu a.
Esi yiri ihuenyo gam akporo na kọmputa
Taa, anyị na-egosi gị nnukwu ihe ngwọta iji nweta Mirroring nke gam akporo gam akporo na kọmputa
Ngwa 3 iji mara ihe ị na-akwụ site na mkpanaka gị na ụgwọ ọkụ eletrik ọ bụla
Anyị na-ewetara gị ngwa 3 maka gam akporo nke ijikwa ụgwọ ọkụ eletrik ọhụrụ site na mkpanaka gị wee si otú a nwee ike ịchekwa euro ole na ole.
Etu esi ege ntị redio's Apple Beats 1 na gam akporo
Gee ntị na ọdụ 1 redio nke Apple Music site na ngwaọrụ gam akporo gị na nsụgharị 4.1 ma ọ bụ karịa
Boomerang, mgbatị dị egwu maka Google Chrome nke na-enye anyị ohere ịhazi izipụ ozi ịntanetị site na Gmail
Taa, m na-egosi gị otu esi ahazi nzipu ozi ịntanetị sitere na Gmail maka mgbatị na-enweghị atụ maka Google Chrome.
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma maka ụmụaka site na 4 ruo 8 afọ: Taa, Lego Juniors Quest
Taa, anyị na-ewepụta ngalaba nke egwuregwu kacha mma gam akporo maka ụmụaka site na 4 ruo 8 afọ na Lego Juniors Quest, egwuregwu na-akpali akpali ma dịkwa mma site na ụlọ ọrụ Lego nke ga-atọ ụmụaka ụtọ n'ụlọ
Samsung Galaxy S4 batrị nsogbu? Lee ụfọdụ ndụmọdụ ịpịtụkwu ntakịrị
N'isiokwu a anyị na-enye gị ụfọdụ ngwọta maka nsogbu batrị nke Samsung Galaxy S4 yana nhọrọ kachasị mma ịzụta.
Pushbullet na-enweta Nnukwu Mmelite na Nkata, Nnukwu Njikwa faili Nweta, na More
Pushbullet na-enweta nnukwu mmelite jupụtara na njirimara ọhụrụ dịka isi nkata maka Windows, mmelite interface, nkata na ọtụtụ ndị ọzọ.
Uzo mkpirisi keyboard ugbu a na ekwentị gam akporo gi na ntinye +
Ntinye + bụ nnukwu ngwaọrụ iji weta ụzọ mkpirisi keyboard na ngwaọrụ gam akporo gị wee si na-arụpụta ihe.
[APK] Jair Music Player, otu nke kachasị mma Ihe eji egwu egwu egwu emelitere na ndozi dị mkpa
Taa, m kwadoro Jair Music Player ọzọ, nke m ka bụ otu n'ime ndị egwu egwu kacha mma n'efu maka gam akporo.
A na-emelite Truedialer kpamkpam na imewe yana mmelite ọhụrụ ahụ
3.0dị nke XNUMX na - eweta ihe eji emezi ihe na Truedialer, ngwa iji dochie igwe okwu gam akporo.
Taa, anyị n’egosi gị ụzọ kachasị mfe iji malitegharịa ekwentị gam akporo gị na ọnọdụ Iweghachite yana usoro ndị ọzọ amalitegharị.
2 uzo ozo di na Googlelọ Ahịa Google ka ibudata ngwa gam akporo
Taa, anyị na-ewetara ụzọ abụọ dị na Playlọ Ahịa Google ka ị budata ngwa maka njedebe gam akporo anyị.
Weghachite ọkwa na ọkwa ọkwa na Android Lollipop na Ticklr
Ticklr weghachite amamọkwa na ọkwa ọkwa nke ngwaọrụ gam akporo gị ọbụla deactivate Heads Up nke na-agaghị amasị onye ọ bụla.
Splash ihuenyo amalite iru Google ngwa
Igwe nnabata ma ọ bụ 'Splash Screens' na-egosi na Google Maps na Youtube mgbe ngwa ahụ bidoro. Ihe ijuanya sitere na Google.
Were ọkụ n'ọnụ gị na FireWhip na-eri ahụ
Na flares ị ga-ewepụ ndị iro niile na egwuregwu a dị mfe ma dịkwa mfe akpọrọ Firewhip maka gam akporo. Ọdịnaya niile nwere otu ugwo.
All obi ụtọ nke World Superbikes na gị gam akporo ama na ikpọ SBK15. Egwuregwu vidio dị oke mkpa.
Chillingo na-ewetara anyị ihe ngosi Tiny Troopers 2: Special Ops to Android iji gaa n'ihu na-atọ ụtọ na aha gara aga hapụrụ anyị.
Siege bụ egwuregwu ọhụrụ nke Gameloft nke nwere ọtụtụ myirịta na Nsogbu nke Clans, yabụ jikere wuo ntọala gị.
Nke atọ na nke ikpeazụ bụ nke anyị na-ekekọrịta niile Asus Zenfone 2 ngwa awụnyere na ihe ọ bụla gam akporo ọnụ.
[APK] Ngwa Asus Zenfone 2 niile (2): Elekere, Calculator, Kalinda, Ndenye Ndetu na Super Cheta nke Asus Zenfone 2
N'ebe a, anyị hapụrụ gị nke abụọ nke ngwa niile nke Asus Zenfone 2 iji nwee ike ịwụnye ha na njedebe ọ bụla gam akporo.
[APK] Ngwa niile Asus Zenfone 2: Asus Zenfone 2 Music, Gallery na ngwa ndekọ edekọ
You chọrọ ngwa niile nke Asus Zenfone 2? Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​gaghị echefu post a ebe anyị na-ekerịta egwu, gallery na ngwa ndekọ ụda nke Asus Zenfone 2.
Amazing Android ngwa: Taa, The Cleaner agbam ume & ọcha
Taa, anyị na-ewetara The Cleaner agbam ume & ọcha, ihe ngwa ma ọ bụ mmezi ngwá ọrụ maka anyị Androids ga-abụ ihe dị mkpa na gị ọnụ.
[APK] Etu esi wụnye Asus Zenfone 2 Launcher na gam akporo 4.3+ ọ bụla
Taa, anyị na-akọwa otu esi atụgharị gam akporo gị na Asus Zenfone 2 site na nbudata na ịwụnye Launcher nke Asus Zenfone 2 the ZenUI Launcher.
Nwere ike gụọ Androidsis na News Republic, ngwa kachasị mma maka gam akporo
Taa, anyị kwadoro ihe maka m bụ ngwa ozi kacha mma maka gam akporo.
Tinder maka nkịta na-abịa gam akporo: Tindog
Ọ bụghị na nkịta gị ga-achụgharị ma na Tindog ị nwere ike ịmata ndị nkịta ndị ọzọ hụrụ n'anya nọ n'ógbè gị.
Google weputara uzo Google Play Music na akwado ya
Google ga-enye Play Music n'efu na redio mana ya na mgbasa ozi iji zoo Spotify na Apple Music mgbe ọ rutere na ọdịda.
Esi lelee ma GPU ngwaọrụ gị nwere akara na okpokolo agba
Site na sistemụ gam akporo n'onwe ya anyị nwere ngwa na-atọ ụtọ ịlele ọnọdụ nke GPU ngwaọrụ.
Anyị enweela ndị mmeri atọ nke ihe nrite maka ihe ndekọ 3 Todoist Premium iji mee mmemme ọhụrụ ha na Ihe eji emepụta
Site na Androidsis na mmekorita ya na Todoist anyi choro ihe omuma 3 ka i wee nwaa omume oma nke ohuru ohuru nke biara na ihe eji eme ihe.
Olee otú wụnye Samsung Galaxy S6 ogbugbu akpọchi usoro na ihe ọ bụla gam akporo
Taa, anyị na-egosi gị otu ị ga - esi wụnye ma hazie ngwa ga - eme ka ị nwee ọ enjoyụ usoro mmeghe nke Samsung Galaxy S6 na gam akporo ọ bụla.
[APK] Usoro ikpeazụ nke Dropbox na Ihe eji emepụta ihe maka onye ọ bụla
3.0dị XNUMX nke Dropbox dị na ihe eji emepụta ihe niile nke pụtara nnukwu mgbanwe na interface na imewe nke ngwa ahụ.
Etu esi edozi ụgbọ elu, ụgbọ oloko na tiketi ụgbọ ala na ọnụahịa kacha mma site na gam akporo gị
Taa, anyị na-akwado GoEuro, ngwa dị egwu maka gam akporo nke ga - enyere anyị aka ịchọta ma debe ụgbọ elu, ụgbọ oloko na tiketi ụgbọ ala na ọnụahịa kachasị mma na ihe gbasara sekọnd.
Jikwaa PC gị na ihe ndina ya na Intel Remote Keyboard for Android
Intel Remote Keyboard na-enye ohere ịmekọrịta PC gị na gam akporo n'ụzọ dị mma. Nnukwu ngwa sitere na nnukwu Intel.
World Radio FM, ụlọ ọrụ redio sitere na gburugburu ụwa na iru nke gam akporo gị
Taa, m na-ewetara gị ngwa ọrụ redio dị egwu nke ga-eme ka anyị gee ụlọ ọrụ redio sitere n'akụkụ ụwa niile na Androids anyị.
[APK] Otu esi lelee Copa América n'efu na gam akporo gị. (Na ihe omume egwuregwu ndị ọzọ nwere mmasị)
Taa, m kwadoro ngwa ngwa kachasị mma maka gam akporo iji lelee Cup of America n'efu.
[APK] Netease Music the Chinese Spotify sụgharịrị nke ọma n'asụsụ Spanish [Emelitere 22/10/2015]
Ọzọ anyị ga-ahapụrụ gị APK nke Netease Music na Spanish sụgharịrị ekele maka gam akporo obodo nke ndị enyi nke HTC Mania.
Njikwa Ihe Nchọgharị Ultimate, ogo dị elu, fechaa, ihe nchọgharị weebụ meghere emeghe
Ultimate Browser Project bu ihe ohuru, nke di oke nfe ihe nchoghari weebu nke a na-etolite oge niile ma nwee ezigbo usoro nke iji hazie ya.
Crime Crime, ma ọ bụ ihe ga-abụ Nrụrụ Aka na Miami na ekwentị gị
Crime Coast bụ egwuregwu na-atọ ọchị ebe anyị ghọrọ akụkụ nke otu ndị omempụ bụ ndị maara naanị otu esi ezu ohi, na-emebi ndị ọzọ ma na-emebi ya.
Jungle Force, RPG na ọgụ na-atụgharị iji tinye oke ọhịa na ụkwụ gị
Jungle Force bụ RPG na-adọta na ihe ndị a Final Fantasy saga na nke na-enye anyị ọgụ dabeere na ntụgharị ihu na anụ ọhịa ọhịa dị ka protas.
Bụrụnụ ezigbo troll na Troll Face Quest Unlucky
Troll Face Quest Unlucky na-eweta na troll n'akụkụ na anyị niile nwere ntakịrị na-eme ka anyị wepụ ya ogologo oge.
Tower Slash, ihe eji egwu egwu iji mee ka akwara gị dị n'akụkụ
Rigo ulo elu wepu ndi nche ichota onye isi gi, ma obu ihe Tower Slash kwesiri ime.
Otu esi emepụta wijetị na ngwa ndị na-adịbeghị anya na Android Lollipop
Ngwaọrụ MRU bụ ngwa dị ukwuu iji nwee wijetị na ngwa ndị dị ugbu a sitere na desktọọpụ. Maka 5.0 Lollipop Android ma ọ bụ karịa.
[APK] Netease Music, Chinese Spotify nke na-enye anyị ohere ịmechaa ọba nke ndị ọkacha mmasị kachasị amasị anyị na Bekee
Netease Music bụ Chinese Spotify, kpam kpam free na na ndị ọzọ ohere karịa Spotify Premium.
Quickpic ka na-eguzo na njirimara ọhụrụ abụọ: chọọ ma swipe iji họrọ ọtụtụ onyonyo
Ọhụrụ Quickpic webatara ọchụchọ na swipe maka ọtụtụ nhọrọ nke onyonyo. Nke ikpeazụ dị na Foto Google.
Google na-eweta elekere Elekere na Storelọ Ahịa Play na Designdị Ihe
Ngwa gam akporo sistemụ elekere na-abịa na Playlọ Ahịa Play na ngwoolu na Ekike Ihe. Oge zuru oke iji melite ngwa ahụ.
Nchekwa ma na-edebeghi Intanet maka Rocket VPN - Nnwere onwe .ntanetị
Taa, m na - adụ gị ọdụ otu ngwa maka gam akporo iji nwee ike nweta Internetntanetị echekwara nke ọma
Kekọrịta ihe oyiyi na BitTorrent Shoot n'etiti ngwaọrụ dị iche iche na-enweghị ịchekwa ha na igwe ojii
A mụrụ BitTorrent Shoot na ebumnuche nke inye onye ọrụ ikike ịkekọrịta ihe oyiyi n'etiti nyiwe dị iche iche.
Etu ị ga-esi kesaa ngwa na egwuregwu vidiyo zụrụ na gam akporo na ezinụlọ
Anyị na-akụziri gị ịkekọrịta ngwa niile na egwuregwu vidiyo zụtara site na Storelọ Ahịa ka onye ọzọ n'ezinụlọ nwee ike ịnụ ụtọ ha.
Facebook Lite mechara rute na Spain ka ndị ọrụ nwee ike ịnweta Facebook kachasị karịa nke na-ewe obere data.
Egwuregwu Egwuregwu +, ngwa Samsung maka ngwaọrụ Galaxy nke na-edekọ egwuregwu egwuregwu vidiyo
Egwuregwu gị na egwuregwu kachasị amasị gị nwere ike ịdekọ site na Samsung Galaxy ngwaọrụ site na taa site na Game Recorder +
Easily zipu faịlụ site na kọmputa gị na ekwentị mkpanaaka gị na Pushbullet Portal
Portal specializes na-ebufe faịlụ n'etiti kọmputa na mobile na mesiri ike na mfe nke usoro.
Lezie !!, Oké nche nsogbu na Samsung ọnụ nke ga-emetụta ihe karịrị 600 nde ngwaọrụ
Nsogbu nchebe siri ike na njedebe Samsung nke ga-emetụta ihe karịrị nde 600, gụnyere Samsung Galaxy S6 na S6 Edge, Galaxy S5, S4 na S4 mini.
Ebumnuche Port LG G4 maka LG G2 ChelozTeam UX 4.0 Dị egwu !!
Taa, anyị na akwado gị ma kuziere gị otu esi etinye Port LG G4 a na-akpali akpali na LG G2
Gbalịa Reader Business Card Reader yana atụmatụ ya niile arụ ọrụ n'efu rue Septemba 1, 2015
Taa, anyị na-enye gị koodu nkwalite Business Card Reader Free iji nwaa n’efu ọrụ niile nke ngwa kachasị mma iji jikwaa, hazie na digitize kaadị azụmaahịa anyị niile.
Adobe na-ebupụta igwe ojii igwe ojii anọ dị na gam akporo
Taa E mepụtara Creative Cloud 2015 na nnabata nke ngwa gam akporo 4 ọhụrụ: Agba CC, Photoshop Mix, Shape CC na Brush CC.
Torchlight na-abịa gam akporo afọ a
Torchlight ga-abanye na gam akporo na njedebe nke afọ na mbipute belata ma kwadebe maka ngwaọrụ mkpanaka site na ncha.
Tiki Taka Bọọlụ, ikekwe egwuregwu bọọlụ kacha mma maka gam akporo
Ọ bụ ihe dị ka oge anyị nwere egwuregwu bọọlụ na-agba n'ụdị egwuregwu ọzọ wee nwee nnukwu ihe kpatara anyị ga-eji bụrụ otu kachasị mma.
Brickies, na-agbakwunye ihe bụ akụkọ ifo Arkanoid
Arkanoid bụ egwuregwu akụkọ ifo na mbubreyo 80s na Noodlecake Studios na-ewetara anyị egwuregwu egwuregwu ka mma yana ogo niile ọ na-enye egwuregwu ya.
You chọrọ ịbụ onye nchịkwa nke otu egwuregwu bọọlụ ama ama? Ọ bụrụ otu a, Fantasy Manager Football 2015 bụ egwuregwu gị maka gam akporo
Taa, anyị na-ewetara Fantasy Manager Football 2015, egwuregwu na-akpali akpali maka gam akporo nke ga-enye anyị ohere ịbụ onye nchịkwa bọọlụ nke otu ndị egwuregwu ama ama ahọrọ ma jiri aka anyị debanye aha.
Karate frog si Green Ninja: Afọ nke Frog na-echere gị na egwu ya na-egbu egbu
Green NInja: Afọ nke Frog bụ egwuregwu vidio na-atọ ụtọ na onye na-eche na ọ bụ Bruce Lee na ọ bụ frog n'elu.
Nnụnnụ ndị na-ewe iwe na-abịarute ịnwe ezigbo oge na mgbagwoju anya ekwensu
Nnụnnụ ndị na-ewe iwe na-adọrọ mmasị bụ Rovio maka ihe bụ otu n’ime ụdị mkpụrụ akụ kachasị ada na Storelọ Ahịa Play.
Icondy, ngwa nke na - enyere gị aka ijikọ akara ngosi site na ngwugwu dị iche iche
Icondy na-enye anyị ohere ikpokọta akara ngosi akara ngosi dị iche iche n’ụzọ dị mfe iji hazie ekwentị gam akporo anyị.
Asịrị maka batrị Motorola DROID 2 4.200mAh batrị, Snapdragon 810?
Mkparịta ụka mbụ nke Motorola DROID 2 na-esote pụtara. Ngwọta nke nwere ike ịbịa batrị 4.200 mAh yana Snapdragon 810.
Esi Flash 2 Roms na Xiaomi Mi4
N'ime nkuzi vidiyo ndị a bara uru, m na-egosi gị usoro otu esi agbanye 2 Rom na Xiaomi Mi4.
Etu ị ga - esi melite Xiaomi Mi4 na gam akporo 5.1 Lollipop
Taa, anyị na-egosi gị otu esi etinye Android 4 Lollipop na Xiaomi Mi5.1.1 gị
APUS Browser, ngwa nchọgharị ngwa ngwa, dị mfe ma fechaa
APUS Nchọgharị bụ ihe nchọgharị weebụ nke na-apụta maka ịdị arọ ya, interface doro anya na ngwa ngwa ngwa nke weebụsaịtị.
Taa, anyị na-egosi gị otu ị ga-esi gbanye Xiaomi Mi4, gbanye CWM Iweghachite ma wụnye Spanish Miui V6 Rom.
Ube Red 9, ekwentị ndị China nwere batrị 5000 mAh
E nwere ama ndị China na-adọta uche anyị, dị ka Beidou Red Pepper 9, ọnụ ahịa ndị China na-etinye batrị 5000 mAh.
Doodle Draw, egwuregwu vidiyo mbụ maka Facebook Messenger
Facebook Messenger tinyere egwuregwu vidiyo izizi a kpọrọ Doodle Draw, nke bụ ụdị Akwụkwọ ọkọlọtọ maka ịbịaru ihe.
Etu esi anwale Firefox OS na ntanetị ọ bụla nke gam akporo
Taa, m na-akọwa etu esi anwale Firefox OS na ngwụcha ngwanrọ ọ bụla na ntinye dị mfe nke ngwa dị mfe.
Nkwalite mkpọchi, tinye ogwe na ngwa ndị kachasị amasị gị dịka ọnọdụ, netwọk Wi-Fi na ndị ọzọ
Nkwalite mkpọchi bụ ngwa zuru oke ịnwe na ọkwa ọkwa ngwa ị na-eji dịka ọnọdụ, netwọk Wi-Fi ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ.
Malite, otu nke kasị mma edochi gị gam akporo mkpọchi ihuenyo
Taa anyị na-ewetara Start, a na-akpali akpali nnọchi maka mkpọchi ihuenyo gị gam akporo ọnụ site na nke ị nwere ike isi na-emekọ ihe na a kpam kpam n'ụzọ dị iche.
[APK] Ebe ngosi ohuru na nhọrọ ịgbazite ụgbọ ala na Google Maps 9.10
Google Maps 9.10 na - ewetara gi ihe ndi mara nma dika ike o n’enye onye oru ya site na ngwa a n'onwe gi ime
Esi gbanyụọ oku olu WhatsApp
Taa, anyị na-egosi gị nhọrọ abụọ dị iche iche dị irè iji kwụsị oku olu WhatsApp
A gam akporo M ga - edozi nsogbu nsogbu obodo?
Ọhụrụ gam akporo M melite nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka nsogbu nnwere onwe nke ụfọdụ ụdị na-egosi. Taa, anyị na-agwa gị ihe anyị ma.
Ngwa ngwa gam akporo di egwu: Taa, Njikwa faili
Taa, anyị na-ewetara File Explorer, ihe nchọgharị faịlụ gam akporo nwere ọtụtụ njirimara na njirimara onye ọrụ yana mfe iji.
Flynx, ihe nchọgharị weebụ nke na-agbaso usoro nke Link Bubble
Flynx bụ ihe nchọgharị weebụ nke na-agbaso njikọ Bubble Link maka ịme ọtụtụ ma ọ nwere nhọrọ ole na ole ndị ọzọ.
Etu ibudata vidiyo YouTube na ekwentị gam akporo gị
Anyị na-egosi gị otu esi ebudata vidiyo YouTube na gam akporo maka egwu na-adịghị n'ịntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị.
Etu esi gbanyụọ isi nkata ma ọ bụ mpi nkata na Facebook Messenger
Facebook ozi nwere peculiar nkata isi ma ọ bụ nkata egosipụta iji ngwa ngwa zaghachi kọntaktị. Anyị na-egosi gị otu esi gbanyụọ ha.
YAVOY si Movistar ugbu a na ngwa maka gam akporo
Taa, anyị na-ewetara ngwa YAVOY ọhụrụ sitere na Movistar maka gam akporo ebe ị nwere ike ijikwa akaụntụ YAVOY gị na mgbakwunye na ịnwe ọnwa abụọ nke ọdịnaya n'efu
Na-abịa n'oge na-adịghị anya site na ụlọ ahịa Samsung Dị ọcha Lollipop maka Galaxy S6
The Galaxy S6 nwere ike n'oge na-adịghị anya nwere ezigbo isiokwu Android Lollipop iji nye ndị ọrụ ihe ngosi ka mma.
Hitman: Sniper, nlọghachi nke onye na-acha ọcha na-egbu ọchụ na gam akporo
Hitman: Sniper bụ nlọghachi nke Square Enix na onye na-acha ọcha na-acha ọcha nke anyị hụrụla ọtụtụ oge na nyiwe ndị ọzọ.
Yak Dash: Mpi nke Otuto, ọchị na enweghị nchegbu agbụrụ gị na Yak
Yak Dash: Mpi nke Otuto na-etinye gị n'azụ yak gị iji merie agbụrụ ma nwee ọchị na nzọ dị nro na nke obi ụtọ.
Nnukwu akụkọ na-echere gị na obere mkpuru a na-akpọ Nubs 'Adventure
Nub Adventure nwere na amaghị m ihe, nke na-eme ka anyị kpoo anyị site na nnukwu ngwakọta nke ihe. Akwa ikpo okwu.
Radical Rapelling, braving kasị dị ize ndụ mgbidi na ọhụrụ si Halfbrick Studios
Radical Rappelling bụ ihe ọhụrụ site na Halfbrick maka ụbọchị ndị a ebe enwere ike ịnwe egwuregwu dị egwu n'ụzọ kachasị mma.
Ebe kacha mma ikiri asọmpi Champions League nke 2015 bụ ngwaọrụ gam akporo gị
Taa, anyị na-akọwa nhọrọ abụọ iji hụ nke ikpeazụ nke Njikọ Njikọ na-ebi ndụ yana ọfụma sitere na njedebe gam akporo gị.
Etu esi gbanyụọ amamọkwa “Isi-elu” na Android Lollipop na-enweghị mgbọrọgwụ
Anyị na-egosi gị otu esi gbanyụọ ọkwa "Isi-Up" na ụzọ dị mfe nke ga-enyere gị aka ijide ha kpamkpam.
[APK] Etu esi wunye gam akporo Elekere M na Kit Kat na Lollipop
Taa, anyị na-ekerịta ngwa nke elekere gam akporo M, anyị na-egosi gị ọrụ ya niile ma anyị kọwaa ụzọ ntinye dị mfe.
Minecraft n'akpa uwe Edition na-enweta ugwo skins, jackpots na ndị ọzọ na ọhụrụ version
Minecraft Pocket Edition ka emelitere na ọtụtụ ihe ọhụụ dị ka akpụkpọ akwụ ụgwọ na akwụghị ụgwọ, yana kedu ụgbọ mmiri ga-eji anụ ụlọ gị gbagoo.
Taa, anyị na-egosi gị ụzọ ziri ezi iji melite Samsung Galaxy S2 na gam akporo 5.1.1 Lolllipop ma nye ndụ ọhụụ na ọnụahịa gam akporo a dị egwu.
Agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe ịtụnanya, taa anyị na - egosi gị usoro otu ị ga - esi melite Samsung Galaxy Tab 7 Android 5.1.1
You na-aga ịzụta ọnụahịa gam akporo ọhụrụ?. Ihe, teknụzụ comparator
Taa, anyị na-akwado ngwa ọrụ, onye na-ahụ maka teknụzụ nke ga - enyere gị aka ịtụle ngwa ọrụ ọ bụla ma ọ bụ teknụzụ.
Ọ bụrụ na ụbọchị abụọ gara aga, anyị maara ụfọdụ nkọwa zoro ezo nke gam akporo M, taa bụ oge maka ụfọdụ ndị ọzọ dịka onye njikwa RAM ọhụrụ.
Ihe ohuru sitere na Line bu Popcorn Buzz, oku ndi mmadu ruru ndi oru 200 n’otu oge
Line ka malitere Popcorn Buzz, ngwa nke mbido ya bụ oku olu nke otu narị ndị ọrụ n'otu oge.
Ezi uche Atụmatụ ịzọpụta ndụ batrị na gam akporo
Taa, m na-akọwara gị site na okwu, ụfọdụ ndụmọdụ nke ezi uche kachasị mma ga-enyere anyị aka ịchekwa batrị na gam akporo na-enweghị mkpa maka ngwa ndị ọzọ.
FXGuru Movie Editor, ngwa ntinye iji mepụta mmetụta vidiyo dị egwu
Taa, anyị na-egosi gị ngwa dị egwu maka gam akporo iji mepụta nsonaazụ vidiyo dị egwu.
Omume ọma nke nnukwu foto Google
Foto Google na-enye onye ọrụ nbudata na-akparaghị ókè nke foto ha niile na vidiyo kpamkpam n'efu, ewezuga usoro atụmatụ dị ukwuu
Imgur na-enweta mmelite buru ibu na ụdị nke 2.0 yana usoro ọhụụ ọhụrụ
N'ikpeazụ, anyị nwere ngwa Imgur nke na-ebuli ahụmịhe onye ọrụ n'ezie na otu n'ime ahịrị ntanetị ugbu a.
Kamcord malitere na gam akporo iji dekọọ vidiyo nke egwuregwu vidiyo ọ bụla na ngwaọrụ mkpanaka gị
Kamcord bụ ngwa na-enye ohere ndekọ nke egwuregwu egwuregwu na-elekwasị anya na nke a na nke mechara rute na gam akporo.
Ozi niile na usoro telivishọn kachasị mma na mkpịsị aka nke gam akporo gị
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọgwụ ọjọọ riri ahụ ma ọ bụ onye na-eso ụzọ nke usoro telivishọn kacha mma, mgbe ahụ ngwa a enweghị ike ịla n'iyi na ọnụahịa gam akporo gị.
Otu esi eji Google ugbu a Launcher na Landscape mode na unsupported ọnụ (video)
Taa, m na-egosi gị #TrucoAndroid nke ga-enye anyị ohere iji Google Ugbu a Launcher na Landscape mode na ndị na-abụghị dakọtara ọnụ
Taa, m ga - egosi gị otu ị ga - esi melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 5.1.1 maka ihe ịtụnanya Rom Lollipop na ụdị ọhụụ ya nke Mbilite n'ọnwụ Remix mepụtara.
Anọ nkọwa nke gam akporo M
Gam akporo M ga-eweta ọtụtụ ọhụụ dị ka mmụba arụmọrụ na ọtụtụ nkọwa. Anọ bụ ndị anyị kwuru na post a.
Zọ 3 dị mfe iji were ihe edeturu olu na gam akporo
3 ngwa ngwa ụzọ mepụta ncheta olu na gam akporo ma si otú a gbasoo nzọụkwụ nke Agent Cooper na Twin Peaks ka anyị ghara ichefu ihe ọ bụla.
12,4% nke gam akporo ngwaọrụ nwere ụfọdụ ụdị nke Lollipop
Otu afọ mgbe egosipụtara gam akporo L gosipụtara, Lollipop dị na 12,4% nke ngwaọrụ gam akporo na-abanye na thelọ Ahịa Play na izu 1.
Ndị ọrụ nzuzo nzuzo Russia rutere na Yotaphone
A mụrụ mobiles Yotaphone dị ka onyinye akwụkwọ na ahịa, ọ bụ ezie na eziokwu na ha nwere ike ịbụ nledo nke gọọmentị Russia achọghị.
Otu esi eme ka otutu window di na gam akporo M
Taa, m na-akọwa otu esi eme ka ọtụtụ windo dị na gam akporo M, ọrụ zoro ezo na site na mfe ma ọ bụ ọnụ a dị mfe anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ tupu mmemme ikpeazụ ya.
Ngwaọrụ Google ọhụrụ iji nye gị ikike ịchịkwa nzuzo gị na nchekwa gị
Google weputara "Akaụntụ Google m" iji nye onye ọrụ ihe dị iche iche maka nzuzo na nchekwa nke ngwaọrụ gam akporo ha
Esi mgbọrọgwụ Nexus na gam akporo M
Taa, anyị na - egosi gị usoro otu esi Root Nexus na Android M, dị mma maka Nexus 5, Nexus 6 na Nexus 9.
6 nke ngwa Microsoft kachasị mma maka ngwa gam akporo gị
6 kacha mma Microsoft ngwa ọdịnala dị na gam akporo na nke ahụ na-egosi otu ị mara esi zụlite nnukwu sọftụwia
Nihilumbra, ụwa buru ibu inyocha na-echere gị juputara na mgbagwoju anya na nyiwe
Nihilumbra bụ nzọ sitere na ụlọ egwuregwu vidio vidio sitere na ala anyị nke na-enye nnukwu akụkọ, ụfọdụ egwuregwu mgbagwoju anya na akụkụ dị egwu.
Obi Ọjọọ: Okporo Streetzọ, oke egwuregwu mara mma nke igba bọọ na ọkpọ aka ekpe na aka nri
Ekpe na aka nri na-echere gị na Kung Fury: Street Rage na arcade ahụ nke ndị jupụtara na arcade.
Nsogbu oghere? Android M ga-enye gị ohere ịwụnye ngwa na osisi USB
Otu ihe ohuru nke gam akporo M ga - enwe ike itinye ngwa na mpụga ike draịva.
Android M ga-enye gị ohere ịhazi ntọala ngwa ngwa
Ihe ọhụụ ọhụrụ gam akporo M ga-eweta ga-abụ ohere ịmegharị ntọala ngwa ngwa, ihichapụ ihe ndị ahụ anyị achọghị
Google na-edozi nsogbu njikwa olu na gam akporo M
Gam akporo M na-edozi otu nsogbu nke onye bu ya ụzọ site na ijikọta ijikwa olu dị mfe ma dị irè karị
Android M na-etinye isiokwu gbara ọchịchịrị iji chekwaa batrị
Otu n'ime ndị isi na-adọrọ mmasị ikpeazụ mbipụta nke Google Mmepụta ogbako, Google I / O 2015,…
Gam akporo M nwere otutu window mode, ọ bụ ezie na ugbu a ọ na-ezo
Otu n'ime ihe ọhụrụ gbasara gam akporo M ga-abụ ọnụọgụ ọtụtụ window. Ọ dịlarị, ma ugbu a n'ụzọ zoro ezo.
Etu esi wụnye ihe ntanetị gam akporo M ọhụrụ na gam akporo gị, ọ dị irè maka Lollipop na Kit Kat
Taa, m na-egosi gị usoro otu esi wụnye gam akporo M Launcher ọhụrụ ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya karịa onye ọ bụla ọzọ.
Square Enix laghachiri na ọgụ na njedebe na-enweghị njedebe Lara Croft: Relic Run
Square Enix na-ewetara anyị onye na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ na Lara dị ka onye bụ isi na Lara Croft: Relix Run
Etu esi lelee asọmpi iko nke eze na Athletic Bilbao na FC Barcelona na-ebi ndụ n'efu
Taa, anyị na-akọwa ụzọ kachasị mma iji hụ njedebe nke iko Eze n'etiti Athletic Bilbao na FC Barcelona site na njedebe gam akporo gị, adịworị ezigbo mma.
Obere gerousjọ Dungeons, oké Game Boy-ịke platformer
Anyị na-eche arcade nke nwere ike ịgafe dị ka a ga - asị na ọ bụ otu n'ime Gameboy n'onwe ya nwere ọtụtụ awa igwu egwu n'ihu. Nke a bụ obere Dungeons dị ize ndụ.
Gam akporo Wear na-enweta ihu ọhụụ, mana ugbu a enweghị akara nke nkwado iOS
Anyị na-ewetara gị akụkọ niile nke gam akporo Wear 5.1 gosipụtara n'oge mbipụta Google I / O ọhụrụ
Nexus 4 na Nexus 7 2012 nwere ike ọ gaghị emelite gam akporo M.
Gam akporo M ga-abụ mmelite ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ maka ekwentị mkpanaaka, na Nexus 4 na Nexus 7 mbipute 2012 nwere ike ịbụ na-enweghị mmelite a.
Google Smart mkpọchi ga-ejikwa okwuntughe gị ịbanye na ma Chrome na gam akporo
Mkpọchi Google Smart ga-abanye gị na ngwa ndị ọzọ na-enweghị ịbanye paswọọdụ. Ọ ga-ahụ maka ịchịkwa ha niile.
Etu ị ga - esi gbanye njirimara nchekwa na - enweghị ngwụcha nke foto Google site na nkwụsị
Taa, anyị na-egosi gị usoro otu ị ga - esi mee ka nchekwa Google enweghị ngwụcha nwee ọnọdụ foto ọhụụ ruo 16 mpx na vidiyo na 1080p.
Nchịkọta nke ihe niile anyị hụrụ na Google I / O 2015
Google I / O 2015 nwere ezigbo ụnyaahụ ụnyaahụ na ngosipụta nke akụkọ Google niile maka afọ ahụ na gam akporo, Wear na ndị ọzọ
A na-egosiputa ihe ngosi gam akporo M taa site na Sundar Pichai na mkpịsị ugodi isii na-eme ka ihe kachasị mkpa nke ụdị ọhụrụ a.
Otu esi edozi ihu nke Moto 360 site na nkwụsị
Taa, m na - egosi gị usoro na vidiyo Na etu esi ahazi ngwa ngwa Moto 360 site na onyonyo nke aka anyị na ụzọ nke aka anyị.
Microsoft na-ebupụta Office Lens na Storelọ Ahịa Play
Office Lens dị ugbu a n'efu na Storelọ Ahịa Play maka nbudata. Ngwa kachasị mma maka akwụkwọ nyocha
Ndị mmekọ Microsoft na LG, Sony na ndị nrụpụta 18 ndị ọzọ iji wụnye Office na Skype na mbadamba gam akporo
Na ndị nrụpụta 18 ndị sonyeworo Microsoft iji tinye Okwu, Excel, Powerpoint, OneNote, Skydrive, na Skype na mbadamba gam akporo ha.
Microsoft na-akpọsa Cortana maka gam akporo
Microsoft na-akpọsa Cortana maka gam akporo na iOS, ọ ga-abịarute nke mbụ na ngwụsị June. Enyemaka olu nke nyegoro ọtụtụ ihe ikwu.
[Ihe nkiri] Otu esi eme ka ọkụ ọkụ Lollipop Rom dabere na nke gọọmentị na LG G2
N'ime nkuzi ndị a na-akwado site na vidiyo vidiyo m ga-egosi gị otu esi agbanye Flash onye ọrụ gam akporo Lollipop Rom na LG G2.
Etu esi enweta akaụntụ 2 Twitter na otu ngwaọrụ ahụ
Taa, anyị na-akọwara gị na isi ihe nkiri gam akporo vidiyo a, otu esi enwe akaụntụ 2 Twitter na otu ọnụahịa gam akporo.
Supercell na - eme $ 5 nde kwa ụbọchị na Nsogbu nke Clans
Nsogbu nke Clans bụ ihe atụ kachasị elu nke uru nke ụdị freemium na-enye ọnụ ọgụgụ dị mma nke egwuregwu vidiyo
Zoo ihe nzuzo gị niile site na anya ndị ọzọ na Andrognito 2
Andrognito 2 bụ nsụgharị ọhụrụ nke na-apụ apụ maka Nhazi Ihe ya na usoro omume ọma iji zoo faịlụ gị
Etu esi melite LG G2 na gam akporo 5.1.1 Lollipop
Taa, m kwadoro Rome kachasị mma iji melite LG G2 na gam akporo 5.1.1 Lollipop na mgbakwunye ịkụziri gị atụmatụ ya niile na ntinye na usoro na-egbu maramara.
Etu aga-esi tinye ndetu ngwa ngwa na mkpọchi mkpọchi na gam akporo Lollipop
Na Pushbullet anyị nwere ike ịchọta ngwa zuru oke iji mepụta ngwa ngwa iji kpọga ha na mkpọchi mkpọchi na Android Lollipop
Etu ị ga-esi nye ikike ikikere na CM12 na CM12.1 Android Lollipop Roms
Taa m na-akọwa otu esi eme ka mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na CM12, CM12.1 na ewepụtara ROM.
Ntuli aka 2015: you na-undecided? Still ka nwere oge ikpebi na ule ntuli aka 2015
Taa, anyị na-ewetara ngwa magburu onwe ya maka gam akporo, Elections Test 2015, nke ị nwere ike ịme nyocha zuru oke ma mụta banyere mmemme ntuli aka nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile na Spain.
Colors United bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu dị njikere iji nwalee ọgụgụ isi gị
Colors United bụ egwuregwu na-acha agba nke ga-anwa ime ka ị pịkọọ eriri ndị ahụ dị na isi awọ gị
Etu esi agbaso nsonaazụ nke ntuli aka nke mpaghara mpaghara na nke obodo 2015 site na ekwentị mkpanaaka gị. (Gam akporo, iPhone na Windows Mobile)
Taa, anyị gosipụtara gị ụzọ kacha mma iji mata nsonaazụ nke ntuli aka mpaghara na nke ime obodo nke 2015 emere na Spain.
Adịghị Ebugharị, egwuregwu ịkwọ ụgbọala nke ga-eche gị ihu
Adịghị Agbagharị bụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ pụrụ iche anyị nwere na gam akporo na nke ahụ n'onwe ya bụ ihe mbụ mgbe onye simulator nwere ọtụtụ atụmatụ chere ya ihu.
Ihe nrụpụta ụlọ nrụpụta: data na-adịgide na ngwaọrụ gam akporo
Tọgharia Factlọ ọrụ na-enye gị ohere ihichapu data ma weghachite ya otu esi si ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Mana ihe omumu na egosi na na nhichapụ Android abughi ngụkọta.
Urawa Jurassic: Egwuregwu ahụ, Wulite Ogige Ntụrụndụ Dinosaur nke Gị
Jurassic World bụ ihe ọzọ na-ewu isi egwuregwu gị n'agbanyeghị na nke a bụ ogige isiokwu ebe a na-eme ka dinosaurs dị ndụ
Egwuru egwu Yeti Mountain ma ọ bụ egwuregwu kacha mma pixelated nke oge ahụ
Egwuregwu Yeti na-agba ọsọ bụ egwuregwu vidio dị ịtụnanya nke na-enye gị mmetụta nke ịgba ọsọ
[APK] OneClip, Microsoft ka Pushbullet ọzọ ka idetuo na mado n’etiti ngwaọrụ dị iche iche
OneClip bụ ọrụ ọhụụ maka mmekọrịta clipboard n'etiti ngwaọrụ dị iche iche, ọ bụrụ iOS, Android, Windows Phone ma ọ bụ Windows PC
Hexy Launcher, ihe eji ebido ngwa hexagon dabere na ngwa ngwa nke Swiftkey kere
Swiftkey na-eju anyị anya site na Hexy Launcher, ihe ntanetị ngwa ọhụrụ nke na-eme ka desktọpụ gị bụrụ akwa nwere tiled.
Etu esi etinye LG G4 ngwa na LG G2
N'okpuru anyị na-enye gị ngwa LG G4 niile maka nrụnye na LG G2 yana ụzọ ziri ezi iji wụnye ha na ihe a chọrọ iji zute.
Etu esi melite Xperia Z na gam akporo 5.0.2 Lollipop site na iji Flashtool
Anyị na-egosi gị otu esi emelite Xperia Z gị site na nzọụkwụ gaa Android 5.0.2 Lollipop iji Flashtool
Ngwa dị egwu maka gam akporo: Taa LPIN PLAYER, ihe dị egwu na egwu dị iche iche maka gam akporo
Taa na ngalaba nke ngwa dị egwu maka gam akporo anyị na-eweta ihe ọkpụkpọ egwu na-adabaghị maka ndị nostalgic.
Taa, m na-egosi gị otu esi eji Carbon maka gam akporo iji kwado ngwa na data na-enweghị onye mgbọrọgwụ
Etu esi egwu egwu na enweghi ego na gam akporo iji merie onyinye di egwu
Taa, m na-akwado gị ngwa ngwa na-enweghị atụ maka gam akporo nke ga-enye anyị ohere imeri onyinye dị egwu site na ịkụ nzọ na-enweghị ego na mmemme egwuregwu.
Akwụkwọ n'efu na mkpịsị aka gị Android na Wattpad
Wattpad na-enye anyị ọtụtụ puku akwụkwọ n'efu na usoro elektrọnik iji nwee ọ enjoyụ site na njedebe nke gam akporo anyị yana ohere nke ibugo ihe anyị kere iji kesaa ha na ụwa niile.
Swipes, ngwa ohuru iji depụta ihe a ga-eme nke ị gaghị echefu
Swipes bịarutere ka ọ bụrụ ngwa kachasị amasị gị iji detuo ma rụọ ọrụ. Tụnanya maka ya oké imewe na ya mfe na ọrụ
Ọwụwa kalenda na-agbakwunye nkwado na Wunderlist, otu n'ime ngwa kachasị mma maka ịmecha ọrụ
Wunderlist bụ ngwa iji detuo ma rụọ ọrụ nke site na taa nwere nkwado site na kalenda nke Ọwụwa Anyanwụ
Sony Xperia Z na-emelite ya na gam akporo 5.0 Lollipop
Android 5.0 Lollipop na-egbu oge ma ọ dịkarịa ala ọ bịarutere, na Sony Xperia Z.
[APK] Ngwa Instagram maka collages dị ebe a: Okirikiri nhọrọ ukwuu
Okirikiri nhọrọ ukwuu, ngwa Instagram maka ịmepụta collages, dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play mgbe ọ bịarutere iOS na Machị.
[APK] Etu esi etinye Xposed na Lollipop
Taa m na-akọwara gị site na enyemaka nke vidiyo ma na-etinye faịlụ niile dị mkpa maka usoro ahụ, otu esi etinye Xposed na Lollipop.
Gam akporo Wear ga-enwe ike ịza oku n’oge adịghị anya
Ndị na-emepe ihe eji eme ihe na gam akporo na-arụ ọrụ na ihe eji arụ ọrụ nke na-etinye ndị ọkà okwu yana ụdị nke OS iji zaa oku.
Etu ị ga-esi jiri ekwentị gam akporo gị n'enweghị nsogbu mgbe ị na-aga n'okporo ámá
Iris ga-enyere gị aka ịhụ site na ihuenyo mgbe igwefoto nọ n'ọrụ. Ngwa di egwu
[APK] Otu esi gbanye mgbọrọgwụ gam akporo gị dị mfe na nsụgharị Lollipop
Taa, anyị na-egosi gị ngwa doro anya iji nweta mgbọrọgwụ gam akporo gị gụnyere nsụgharị Lollipop.
Zen malite, na minimalist ngwa launcher nke na-erughị ibu mega
1MB bụ ibu nke Zen Launcher, a minimalist ngwa launcher nke nwere ike bụrụ ezigbo ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu
Android nwere naanị 26% nke ahịa azụmaahịa azụmaahịa
Agbanyeghị na nnabata gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ n'etiti ndị ọrụ nzuzo dị ezigbo mma, na ụlọ ọrụ ọ ka bụ naanị 26%.
Olee otú ibudata iyi faịlụ site na gam akporo, ọbụna site nanị weebụsaịtị
Taa, anyị na-egosi gị ihe uTorrent iji chọọ na ibudata iyi faịlụ na gam akporo.
Notifidgets, ngwa nke na-agbakwunye wijetị na ihuenyo mkpọchi na android Lollipop
Gam akporo Lollipop wepụrụ akara ọ bụla nke wijetị ihuenyo mkpọchi. Jiri ngwa a akpọ Notifidges were ha laghachi
Otu esi enweta Pirate Bay na Spain ma gbochie mpaghara ala
Taa, anyị na-egosi gị ụzọ dị mfe iji zere ihe mgbochi mpaghara na The Pirate Bay ma nwee ike ịnụ ụtọ weebụsaịtị iyi egwu sitere na Spain.
Mkpọchi gị ngwa ọdịnala na a paswọọdụ ma ọ bụ kpọghee ụkpụrụ na Hexlock
Hexlock bụ ngwa na-adọrọ mmasị maka nzuzo na nchekwa nke ngwa gị nke na-enye gị ohere ịme ka profaịlụ isii
Esi gbanyụọ ụda agbapụ nke igwefoto Galaxy S6
Anyị na-egosi gị otu esi gbanyụọ ụda mkpuchi nke igwefoto Galaxy S6, ma ị nwere mgbọrọgwụ ma ọ bụ na ịnweghị
Bluboo X550, ọnụ ya na batrị 5.300mAh
Bluboo X550 bụ otu n'ime ngwaọrụ izizi nke ga-enwe nnukwu batrị, ọkachasị na ọ ga-abụ 5.300 mAh.
Izere zombies iji pickaxe na Miner Z
Ọ bụrụ na anyị gwakọtara Minecraft na Pocket Zombie 2 anyị ga-enwe ụdị Miner Z ebe zombie holocaust biri na mbara ala.
A na-egwu egwuregwu ikpeazụ nke njikọ BBVA na gam akporo gị: Atlético de Madrid - FC Barcelona na Spanish - Real Madrid
Taa, anyị gosipụtara gị ụzọ kachasị mma iji lelee Atlético de Madrid - FC Barcelona na Spanish - Real Madrid n'efu na gam akporo gị ma ọ bụ TV gị jikọtara na Chromecast.
Roadzọ Templelọ Nsọ, na-achịkwa frog na-awụlikwa elu kwenyere na ọ bụ Indiana Jones
Roadzọ Temple na-eso nzọụkwụ Flappy Bird na usoro nke egwuregwu vidio nke oke nsogbu mana nke ahụ ga - ejide gị
Astrowings2: Legend of Heroes, a good 3D Martian killer for your Android phone
Astrowings2: Legend of Heroes na-apụta maka ọtụtụ ihe: usoro Cell Shading ya na ịbụ onye na-egbu 3D Martian
Star Trek Trexels, jiri kpakpando gị nyochaa eluigwe na ala ma chebe onwe gị pụọ na Klingons
Star Trek Trexel bụ egwuregwu vidiyo zuru oke maka trekkies na ndị hụrụ akụkọ ifo sayensị, ebe ọ na-enye gị iwu nke ụgbọ mmiri interstellar
4 ngwa ike i scanomi akwụkwọ na-apụghị-efu efu gị gam akporo ekwentị
Ianomi akwụkwọ si gị gam akporo ekwentị bụ n'ezie mfe na nke ọ bụla n'ime ndị a 4 ngwa
Ngwa dị egwu maka gam akporo: Taa, AorK2 egwuregwu a ma ama nke hangman iji maa ndị enyi gị aka
Taa, anyị na-ewetara ngwa izizi nke onye nrụpụta ọhụụ maka gam akporo nke ga-enyere anyị aka igwu egwuregwu kpochapụwo nke hangman na ọbụlagodi ndị enyi na ndị iro anyị.
Microsoft weputara Hyperlapse na gam akporo, ngwa ijide Time-lapse di elu
Microsoft weputara ngwa ozo di nma na Hyperlapse, ngwa nke di na mmepe kemgbe otutu afo na nke n’emeputa oge na ekwenti gi.
[APK] WhatsApp 2.12.87 na ikpeazụ ya nzọụkwụ na-n'ụzọ zuru ezu Ihe Design
WhatsApp dị na nsụgharị ọhụrụ na-ewepu akara ikpeazụ nke Holo Design iji gaa n'ụzọ zuru ezu na Ihe Ekike nke Android Lollipop
Etu esi ewepu gam akporo ngwa ngwa
Taa, anyị na-egosi gị ụzọ kachasị mfe iji wepụ Unroot gam akporo.
LG G2: Otu esi agaghachi na Kit Kat ma ọ bụ AOSP Rom site na gam akporo Lollipop
Taa, m na-akọwa usoro ọ bụla maka ndị ọrụ LG G2: Otu ị ga-esi laghachi na Kit Kit Kat Rom.
Nova launcher 4.0 ugbu a na Storelọ Ahịa Play na ngụkọta mmeghari ohuru na Ihe Ekike
Nke ikpeazu ma kwụsie ike nke Nova Launcher 4.0 mechara nweta ihe niile eji eme ihe ụtọ nke masịrị gị nke ukwuu.
Esi mbanye anataghị ikike Trivia Crack
Taa isiokwu anyị na-aga na-agwa gị banyere otú mbanye anataghị ikike jụrụ ma ọ bụ kama otú na-aghọ aghụghọ ule na a ma ama na ghọtara gam akporo egwuregwu.
[APK] Google Fit na-enweta mita dị anya, tebụl kalori, wijetị na ndị ọzọ
Google Fit na-abịa na nsụgharị ọhụrụ na wijetị, kalori counter, mita dị anya na ihu nche maka gam akporo Wear
Moto E 2015 malitere ịnata Android 5.1 Lollipop
Anyị na-edepụta akụkọ na ahụhụ niile nke gam akporo 5.1 maka Moto E 2015 nke na-erute ọtụtụ ndị ọrụ
Esi gbanye gam akporo gị na Samsung Galaxy S6
Taa, anyị gosipụtara gị ngwa anọ anọghị, otu esi atụgharị gam akporo gị na Samsung Galaxy S6
Ihi ụra, ngwa izi ozi nzuzo nke BitTorrent na-ahapụ ọwa alfa wee rute na akụkọ
Leepra na-ahapụ ọwa alfa ma gosipụta ya dịka otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma maka izipu ozi nkeonwe site na protocol BitTorrent
Real Madrid - Juventus dị ndụ na n'efu
Taa, m na-akwado gị ngwa na-enweghị atụ nke ga-eme ka anyị lelee Real Madrid - Juventus bi na n'efu, yana igwe onyonyo, ihe nkiri na egwuregwu niile dị n'ụwa.
Android 5.1 Lollipop maka Galaxy S6 na S6 Edge na-abịa ọnwa na-abịa
Onwa June bu nke ahoro ka ahoputara maka mbata nke gam akporo 5.1 Lollipop update na Galaxy S6 na Galaxy S6 Edge
Etu esi ekekọrịta intaneti na ekwentị gị
N'isiokwu nke taa, anyị ga-ekwu maka otu esi ekekọrịta fromntanetị site na mkpanaka gị n'ụzọ dị mfe ma si otú a nwee ike ịnweta njikọ site na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Mepụta nnyapade ederede iji nweta ha site na ngosi ngosi na Ncheta Ncheta
Site na Ncheta Nchetara ị nwere ike ịmepụta ihe ngwa ngwa iji tinye ha n'ọnọdụ na-adịgide adịgide site na ụlọ ngosi ngosi
Gam akporo Lollipop melite na ụzọ Moto X (2013)
N'ime izu ole na ole sochirinụ, nkpọtu nke Android Lollipop maka Moto X (2013) ga-amalite. Versiondị nke ndị ọrụ nke nnukwu ekwentị a tụrụ anya ya
Ozi niile dị na ekwentị gị n'oge a na Castro
Castro bụ ngwa ọhụrụ nke nwere ọrụ maka ịgwa onye ọrụ niile njirimara na ozi izugbe nke ekwentị gam akporo ha ma ọ bụ mbadamba
Nwere ike ịdebanye aha maka ngwa ndị na-abịanụ na Google Play
Mgbe ị denyere aha maka ngwa na Google Play, ị ga-enweta ọkwa na ụbọchị mwepụta nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu vidiyo
Kwesịrị inwe ngwa maka oge ọkọchị
Lee ị nwere usoro nke ngwa dị mkpa maka oge ọkọchị na-abịa.
Bụrụ onye isi nri nke ụlọ oriri na ọ Japaneseụ withụ ndị Japan na Ramen Sensei, nke kachasị ọhụrụ site na Kairosoft
Kairosoft bịarutere ọzọ na aha nke na-etinye gị na akpụkpọ ụkwụ nke ịbụ onye isi nri nke nri Japanese a na-akpọ Ramen na The Ramen Sensei
Otu esi enweta ozi email m na Outlook na gam akporo
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ email Outlook ma ịchọrọ ịnweta ya na gam akporo, anyị ga-akọwa nzọụkwụ site na otu esi ahazi ya.
Point ma gbaa gburugburu akuku nke kpochapụwo na Point Blank Adventures
Namco Bandai na-ewetara anyị Point Blank Adventures, ntụgharị nke kpochapụwo iji tụọ ma gbaa ihe niile na-agagharị na ihuenyo
Ndi okike nke Ewu Simulator na-eweta GoatZ, egwu ojoo zombie nke ga - eme ka ị banye maka ara ya
GoatZ dị ọhụrụ site na ndị okike nke Ewu Simulator ma na-agba mbọ ịbụ ewu na-agba ara nke ga-eche ihu na zombie holocaust
Etu esi eji foto Facebook maka kọntaktị m na gam akporo
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka ndị kọntaktị gị na usoro ihe omume ahụ nweta foto ha tinyere na foto Facebook ha, taa anyị ga-agwa gị otu esi eme ya na gam akporo.
Ram zombies na-abụghị nkwụsị na Earn to die 2
Njọ ruo Die 2 na-abịa na nke otu ma na ihe ndị ọzọ, mma ugbo ala na ndị ọzọ ọzọ karịa ya ụzọ, ihe ị na-eche iji wụnye ya?
Otu esi egbochi mgbasa ozi ngwa na gam akporo
Mgbasa ozi na-akpasu onye ọrụ iwe oge ụfọdụ, yabụ anyị ga-akụziri gị otu esi egbochi mgbasa ozi na egwuregwu na ngwa gam akporo.
Amazing Android ngwa: Taa Malitere ịrịa Pop-elu, Kasị Mma Tube tub Player
Taa, anyị na-ewetara gị Viral Pop-elu, nke m bụ ihe kachasị mma Tube ọkpọ ọkpụkpọ, n'ihi ya etinye ya na katalọgụ nke ngwa dị egwu maka gam akporo.
Ọhụrụ gam akporo 5.0.2 melite na-bricking ụfọdụ Nexus 9
Mmelite kachasị ọhụrụ nke gam akporo 5.0.2 na-emebi ụfọdụ Nexus 9 dị ka ndị ọrụ dị iche iche kwuru na Internetntanetị.
Elephone P4000 ga-eweta echi na batrị 4.800 mAh
Elephone bụ otu n'ime ndị nrụpụta China na-ewepụta ngwa ọrụ nwere nnukwu atụmatụ na ọnụahịa mebiri emebi. Elephone P4000 ga-eweta echi.
Otu esi egbochi nje na android
Anyị nwere a usoro nke omume na-anyị gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị nnọọ mma iji zere ntinye nke nje
Etu esi eziga faịlụ mp3 na WhatsApp
Site na arịrịọ ndị ọrụ taa anyị na-akụziri gị otu esi eziga faịlụ mp3 na WhatsApp.
Olee otu ekwentị mkpanaaka si arụ ọrụ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịghọta mgbe ọ bụla otu ekwentị mkpanaaka si arụ ọrụ, taa anyị ga-akọwa ihe ndabere nke nkwukọrịta na ọdụ ndị a.
Na mmemme Google I / O enwere okwu banyere "Voice Access" ka inye ndị ọrụ na ndị mmepe njikwa ngwa ha
Etu esi eji nyocha ulo oru ihe omumu nke asaa: ojiji nke uzo !!
Anyị bịara na nkuzi ikpeazụ banyere otu esi eji ụlọ nyocha wee mepụta nke gị gam akporo Launcher, na nke a anyị na-arara ya nye nhọrọ bara uru nke iji ọkwa.
Na nkuzi nke isii a banyere otu esi eji ụlọ nyocha, anyị na-abanye n'ime imepụta wijetị egwu nke anyị.
WhatsApp mebiri mmekọrịta ya na Google Drive: goodbye to Clouds backups
WhatsApp, na njem a na-atụghị anya ya, hichapụ nkwado ndabere igwe ojii.
Otu esi eji ụlọ nyocha, ihe ọmụmụ 5: Otu esi emepụta wijetị amụma ihu igwe
Lee ị nwere nkuzi nke ise gbasara otu esi eji nyocha ụlọ iji mepụta Launcher gam akporo anyị, na nke a, wijetị amụma ihu igwe anyị.
[APK] Otu esi lelee Barcelona Bayern Munich n'efu
Taa, anyị na gị niile kerịta ngwa na ngwa apk nke ga - enyere anyị aka ile Barcelona Bayern Munich n'efu.
Hụ akụkọ niile nke Android Wear 5.1.1 na vidiyo
N'oge na-adịbeghị anya mmelite ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ maka wearables sitere na Google rutere. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ozi ọma nke gam akporo Wear 5.1.1 na vidiyo
Otu esi eji ụlọ nyocha, ihe ọmụmụ 4: Creatmepụta Elekere Omenala na Wijetị ụbọchị
Na nkuzi nke anọ a banyere otu esi eji ụlọ nyocha, anyị na-akụziri gị ihe niile ịchọrọ ịmepụta elekere na ụbọchị wijetị gị.
Otu esi eji ụlọ nyocha, ihe ọmụmụ 3: Iji ụdị na ọnụ ọgụgụ na ịmepụta akara ngosi batrị
N'ime nkuzi nke atọ a n'iji ụlọ nyocha, anyị na-egosi gị otu esi eji ụdị na ọnụ ọgụgụ yana ịmepụta wijetị ọnọdụ batrị anyị.
Android Lollipop na-enye anyị ohere ịchekwa ma weghachite ngwa anyị
Google na-eme ka ihe dịrị anyị nfe na ụdị ọhụụ nke Android Lollipop, ọ na-enye anyị ohere iji mmekọrịta na ngwa ahụ ma nwee ike ịchekwa data nke ndị a
Mortal Kombat X dịịrị onye ọ bụla na Storelọ Ahịa Play
Mortal Kombat X bụ otu n’ime egwuregwu kacha nwee ọbara na ike dị egwu ị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play. Dọrọ gị aka ná ntị
Feed emelitere na Google Ugbu a mwekota
Versiondị ọhụrụ nke Feedly na-enye mwekota na Google Ugbu a ka kaadị wee gosipụta RSS kachasị mkpa
Otu esi eji ụlọ nyocha, ihe ọmụmụ 2: Na-agbakwunye ederede
Na nkuzi nke abụọ nke nkuzi banyere etu esi eji ụlọ nyocha, anyị gosipụtara gị nhọrọ ị ga - agbakwunye ederede.
Etu ị ga-esi gbochie ebubo ịgagharị data
Ọ bụrụ na ị na-eme njem mba ofesi na ịchọrọ izere ịkwụ ụgwọ gị na ụgwọ gị maka ịgagharị data, rịba ama ndụmọdụ ndị a.
Etu esi egwu vidio na Ndabere na VLC
VLC na-enye ohere site na nsụgharị ọhụrụ iji kpọọ vidiyo na ndabere mgbe ejiri ngwa ahụ pụọ ma ọ bụ gbanyụọ ihuenyo ahụ
Otu esi eji ụlọ nyocha, ihe ọmụmụ 1: ịkwadebe ebe ọrụ na ịmepụta akara ngosi mbụ
N'ime ihe ọmụmụ mbụ a banyere otu esi eji ụlọ nyocha, anyị na-akụziri gị ịkwadebe ebe ọrụ yana ịhọrọ akwụkwọ ahụaja ma mepụta akara ngosi omenala mbụ
Ihe Androidtụnanya Android ngwa: Taa, Launcher Lab iji mepụta ihe nrụpụta gam akporo gị site na ncha
Taa, anyị na-akwado Launcher Lab iji mepụta omenala nke Android Launcher malite na ncha ma na-achịkwa akụkụ ya niile.
AppChat, ebe nkata maka ngwa ọ bụla ị rụnyere
Jikọọ na ọtụtụ puku ndị ọrụ na-eji otu ngwa ọdịnala dịka gị na AppChat, ngwa ọhụụ dị ịtụnanya na gam akporo
Pinball sinipa, mechaa nzube gị na kpochapụwo video egwuregwu
Ihe ndị ahụ bara uru ga-apụ na bọmbụ bọlbụ ahụ ị nwere n'ihu ihuenyo gị a na-akpọ Pinball Sniper
Nkà nke ibibi nka na Bears vs. Art, nke ọhụrụ si Halfbrick
Ihe osise nke ịkụ ihe osise bụ otu ebumnuche nke Halfbrick ọhụrụ na nke a na - akpọ Bears vs. Art
Etu esi emeghe ma gbanye Samsung Galaxy Nexus
Ọ bụrụ na ị na-achọ otu ị ga-esi gbanye ma ọ bụ kpọghee Samsung Galaxy Nexus gị, rịba ama ndụmọdụ niile dị na mkpokọta nke anyị ewetara gị taa.
TinyKeep, onye ulo mkpo nke ulo mkporo nke nnukwu oru nka na nke choro na oru
TinyKeep ga-ahapụ gị ka anya gị ghe oghe mgbe ị na-egwu egwuregwu mbụ gị dịka o nwere ihe niile ga - abụ ụdị kachasị mma
Broken Age, a masterpiece dị ka a graphic njem
N'ikpeazụ, Broken Age dị ebe a, ọmarịcha ihe osise dị egwu nke ga-ewega anyị na akụkọ nke ndị protagonists ya abụọ
Ngwa ndị ọzọ na-abata na Google Ugbu a na 'Ok Google'
Google malitere nnwale na iwu olu maka ngwa ndị ọzọ na Google Ugbu a. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike iji 'Ok Google, Shazam egwu a'
[Download Download] Telegram 2.8 rutere na smart ificationsma Ọkwa, njikọ isonyere otu na ọtụtụ ndị ọzọ
Telegram mbipute 2.8 rutere na ọtụtụ obere nkọwa: smart smartma Ọkwa, njikọ isonyere iche iche na ọtụtụ ndị ọzọ
Otu esi agbanwe site na ekwentị gaa na ekwentị ọzọ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgbanwe site n'otu ekwentị gaa na ekwentị ọzọ, anyị na-akọwa ihe ị kwesịrị ịmara ka ị ghara ị nweta data furu efu n'etiti ụzọ.
Ihe oyiyi ụlọ ọrụ Android 5.1.1 dị maka Nexus 7 WiFi 2012/2013 na Nexus 10
Android 5.1.1 dị ugbu a maka Nexus 7 Wifi 2012/2013 na Nexus 10. Mmelite ọhụrụ nke na-edozi chinchi ma melite arụmọrụ
[Download APK] Ihe ohuru na ozi bụ azịza ọsọ ọsọ na wijetị mkparịta ụka
Google emelitere site na nsụgharị ọhụrụ nke na-eweta atụmatụ ọhụrụ abụọ na-atọ ụtọ: nzaghachi ngwa ngwa na wijetị mkparịta ụka
Evernote weputara Evernote Plus ya na 1GB maka mbugo, nweta ihe na ederede offline na mkpọchi okwuntughe
Evernote Plus na-enye 1GB nke ebugote kwa ọnwa, ịnweta ndetu ihe na-adịghị n'ịntanetị, mkpọchi paswọọdụ, na nchekwa email
Mlais MX, ama ndị China nwere 2 GB nke RAM na batrị 4.800 mAh
Mlais bụ obere mmalite na China nke chọrọ ịbanye n'ụwa nke ekwentị mkpanaaka na n'ihi nke a, ọ wetala ọdụ ọhụrụ, Mlais MX.
Helpin, netwọkụ mmekọrịta ọhụrụ maka oriri mmekọrịta
Helpin bụ netwọkụ mmekọrịta ọhụrụ nke raara onwe ya nye iji mekọrịta ihe n'etiti ndị ọrụ.
[APK] Otu esi edekọ ihuenyo gam akporo ọbụlagodi na ụda
Taa, anyị na-akwado ngwa dị egwu iji dekọọ ihuenyo gam akporo anyị nwere ike ibudata site na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ site na nbudata ngwa nke ngwa ahụ.
Microsoft ga-adị njikere ịkpọsa nkwado maka ngwa gam akporo na Windows 10
Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa nwere Windows 10 ị nwere ike ịnwe ngwa gam akporo niile ma ọ bụrụ na akụkọ Microsoft ga-enye n'izu a bụ eziokwu
Amazing gam akporo ngwa: Taa WiFi Sentinel
Taa na ngwa dị egwu maka gam akporo anyị na-ewetara gị WiFi Sentinel, ngwa ọrụ n'efu maka gam akporo nke ga - enyere anyị aka ijikọ ikwupu WiFi na akpaghị aka na ọgụgụ isi.
Egwuregwu na-eri ahụ maka gam akporo: Taa, Crossy Road ma ọ bụ gịnị mere nne okuko ji agafe n'okporo ụzọ?
Taa na ngalaba egwuregwu riri ahụ maka gam akporo, anyị nwere obi ụtọ igosi Crossy Road, egwuregwu kachasị mma anyị nwere ike iche n'echiche mana nke bụ oge nke oge ahụ.
Google Ugbu a na-agbakwunye kaadị site na ngwa ọhụrụ 70
Site na Google Ugbu a ị nwere ike ịhụ listi ọkpụkpọ nke Spotify na-atụ aro ma ọ bụ ụfọdụ akụkọ sitere na Circa
Usoro iheomume nke oge, ngwa ohuru ma magburu onwe ya ịmata ihu igwe nwere nnukwu nkwado maka Wear gam akporo
Usoro iheomume nke ihu igwe nwere ihe niile mejupụtara iji bụrụ ngwa kachasị amasị gị maka ịkọ amụma ihu igwe
Otu esi eji LG ndabere, ngwa nkwado maka LG
Taa, anyị na-egosi gị otu esi eji LG ndabere iji mepụta ma ọ bụ weghachite LG gam akporo ọnụ.